Iindaba-Ngaba zikulungele ukufunda ngakumbi ngomatshini we-CNC?
1.What Ngaba CNC Machining?
Inkqubo ye-CNC sisifinyezo "solawulo lwamanani lwekhompyuter", olwahlukileyo kwimida yolawulo olwenziweyo, endaweni yoko lubeka umda kulawulo lolawulo. Kulawulo olwenziwayo, umqhubi wesiza uyacelwa ukuba axhokonxe kwaye akhokele ekusebenziseni ngeendlela zokudlala, amaqhosha, kunye nemiyalelo yesixhobo sevili. Kumntu obukeleyo, inkqubo ye-CNC inokufana neseti eqhelekileyo yeekhompyuter, kodwa iinkqubo zesoftware kunye neengcebiso eziqeshwe kwi-CNC machining ziyayahlula kuzo zonke ezinye iindlela zokubala
2.Usebenza njani oomatshini be-CNC?
Izixhobo zomatshini we-CNC zilandela imiyalelo yesoftware yekhompyuter elungiselelwe kwangaphambili. Inkqubo ichaza isantya, ukuhamba, kunye nokuma komatshini ukufezekisa ubume bezinto ezithile. Inkqubo machining CNC ibandakanya la manyathelo alandelayo:
Ukusebenza kwi-CAD: Abaqulunqi basebenzisa isoftware yoyilo oluncediswa yikhompyuter (i-CAD) ukwenza i-2D okanye i-3D imizobo yobunjineli. Ifayile ibandakanya ukucaciswa okunje ngesakhiwo kunye nemilinganiselo, eya kuthi ixelele umatshini we-CNC ukuba uyenza njani le nxalenye.
Guqula iifayile ze-CAD zenze ikhowudi ye-CNC: Njengoko iifayile zeCAD zinokusetyenziswa kwizicelo ezininzi, abaqulunqi kufuneka baguqule imizobo yeCAD ibe ziifayile ezihambelana ne-CNC. Banokusebenzisa iinkqubo ezinje ngesoftware yokuncedisa ikhompyutha (CAM) ukutshintsha ifomathi yeCAD ifomathi ye-CNC.
Ukulungiswa komatshini: Emva kokuba abaqhubi baneefayile ezinokufundeka, banokuseta umatshini ngokwabo. Badibanisa imisebenzi efanelekileyo kunye nezixhobo zokwenza inkqubo isebenze ngokuchanekileyo.
Inkqubo yokwenza: Emva kokuba iifayile kunye nezixhobo zomatshini zilungiselelwe, umqhubi we-CNC unokuqhuba inkqubo yokugqibela. Baqala inkqubo kwaye emva koko bakhokele umatshini kuyo yonke inkqubo.
Xa abayili nabaqhubi begqibezela le nkqubo ngokuchanekileyo, izixhobo zomatshini we-CNC zinokuyenza imisebenzi yazo ngokufanelekileyo nangokuchanekileyo.
3.Usebenza njani oomatshini be-CNC?